जनगणना एक, आयाम अनेक « Yo Bela
जेष्ठ ७, २०७९ शनिबार / Sat May 21, 2022
जनगणना एक, आयाम अनेक
जनुसुकै देशका सरकारको उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक विकास नै हो । तर विकासका जति पनि नीति तथा योजनाहरु बनाउछौं । मुख्यरुपमा तथ्याकंमा आधारीत हुन्नन् भने अर्कातिर प्रगति मापन गर्ने सुचक हामीसँग पर्याप्त हुदैन । त्यसैले हाम्रा धेरै योजनाहरु सुपरफिसियल भइदिन्छन् । संविधान कार्यान्वयनदेखि द दिगो बिकास लक्ष्य, चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले के के परिकल्पना गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ नाप्ने आधार तथ्यांक नै हो । अझ संविधानको मर्म अनुसार यस्तो मापनका लागि समावेशी, लैंगिक मैत्री तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । यसका लागि जनगणना प्रमुख माध्यम हो । सुन्दा जनगणना मान्छेको टाउको गन्ती मात्र हो जस्तो सुनिए पनि यसका अनेक आयामहरु छन् ।
पहिलो चोटी के सोधिदैछ ?
२०७८ सालको जनगणना किन महत्वपूर्ण छ भने दुई तीनवटा कारण छन् । २०७२ को महाभूकम्पमा यति धेरै हाम्रा घरहरु भत्किए, स्कूलहरु तहसनहस भए रोजगारका क्षेत्रहरु धारासायी, बाध्यकारी बसाईसराइ, बैदेशिक रोजगारी भए । महाभुकम्प पश्चात सारा घरपरिवारमा राज्यले सोधपुछ गर्नेे यो पहिलो राष्ट्रिय जनगणना हो । भुकम्प पश्चात गरिएका, सरकार, दातृसंस्था वा व्यक्तिगत तवरबाट भएका काम राहतको प्रभावकारिता पुनर्निर्माणका प्रगति हेर्न सकिन्छ । स्कूल निर्माण हुन नसकेको कारणले बच्चाहरुको पढाइमा के कस्ता प्रभाव पर्‍यो अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा विपदका बेला उद्दार गर्नुपर्दा के कस्ता पूर्वाधार वडाहरुमा छ भन्ने मापन गर्ने पहिलो आधार आगामी राष्ट्रिय जनगणना हो । यसपाली वडा वडामा गएर वडा अध्यक्ष र सचिवहरुलाई प्रश्न सोधिनेछ । वडामा आइपर्ने विपद धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? कस्ता पूर्वाधारहरु वडाहरुमा छन् भनेर प्रश्नहरु सोधिने छ । हाम्रो जस्तो विपद भोगिरहने देशका लागि यो एउटा ठूलो आधार तथ्यांक हो जहाँबाट सरकारले भविष्यमा आफ्ना जनतालाई बचाउन सक्ने वस्तुनिष्ठ योजना बनाउन सक्छ ।
यो राष्ट्रिय जनगणना हो । यो भनेको महाकुम्भ मेला हो । प्रत्येक व्यक्तिको गणना चानचुने कुरा हुँदै होइन । प्रत्येक व्यक्तिको अस्तित्वको कुरा हो । यसको महिमा, यसको गहनताको बारेमा र उत्तरदाताको कर्तव्य बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।
दोस्रोे, यो जनगणना संघीयतापछिको पहिलो जनगणना हो । संघीय प्रणाली बमोजिम आफ्नो वडा, पालिका आफैं बनाउने भनेर अधिकार पाएका छौं । फलानो पालिका कस्तो अवस्थामा छ र अब के गर्नुपर्छ भनेर तथ्यांकको आधारमा र भविष्यको सूचकहरु राखेर पहिलो पटक अधारभूत तथ्यांक दिने जनगणना हो । नेपालमा करीब ७० लाख घरपरिवार छन् । सबै घरपरिवारमा ८० वटै प्रश्न लिएर जाने पनि पहिलो पटक हो यसपाली । अघिल्ला जनगणनामा लैंगिक र समावेशी सम्बन्धि प्रश्नहरु २० प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै सोधिन्थ्यो । यसपटक सबै प्रश्न सबै परिवारलाई सोधिदैछ । सन् २०३० सम्ममा सबैको जन्मदर्ता भइसक्नुपर्छ भनेर दिगो विकासका लागि नेपालले लक्ष्य राखेको छ । पाँचवर्ष वा कम उमेरका बालबालिकाको जन्मदर्ता कति भएको छ भनेर पहिलो पटक प्रश्न सोधिने छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हाम्रो देशले पनि अपनाएको छ । यसको मूलमर्म भनेको ‘नो वान लिभ विहाइन्ड’ अर्थात् कोही पनि पछि नछुटुन् भन्ने छ । यद्यपी नेपालका जनगणनाहरुमा ‘कोही नछुटुन,कोही नदोहोरिउन’ भनेर पहिले देखि मूल सन्देश बनाएको थियो । त्यस कारण हाम्रा जनगणना अलि बृहत, र अग्रगामी छ जस्तो लाग्छ । दीगो विकास लक्ष्य मापनका लागि सरकारले स्थानीय सरकारका लागि छुट्टै लक्ष्यहरु तयार गरिसकेको छैन तथापी यसको मापनको सहयोगका लागि धेरै तथ्यांकहरु आउने छन् । दीगो विकास लक्ष्य पूुर्तिका लागि डेटा रिभोल्युसन अर्थात तथ्यांक क्रान्तिको आवश्यकतामा विश्व समूदायले वकालत गरिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाले यसमा टेवा पुर्‍याउनेछ ।
अपांगताको दृष्टिकोणले समावेशीमा अत्यन्तै समस्यामा परेको समूह हो । विगतमा आठ किसिमका अपांगता सोधिएको थियो भने यस पटक १२ किसिमका अपांगता सोधिएको छ ।
नेपाल राजनैतिक र सामाजिकरुपमा अघि बढिरहे पनि विकासका नीति योजनाले आर्थिक रुपमा आम नागरिकलाई उकास्न सकेका छैनन् । अक्सर हाम्रा योजना बिना तथ्यांक बनेका छन् । विकासका ठूला ठूला कुरा योजनाले गर्दछ तर एउटै शैलीका मनोटोनस देखिन्छन् । नेपालमा १ सय २५ जातजाति भएका देश, यतिका भाषिक, साँस्कृतिक तथा भौगलिक बिविधता भएको अधिकांश एउटै जातजातिका र एकै लिंगका ब्यक्तिहरुले काठमाडांैमा बसेर योजनाहरु बने । नीति र योजना बन्नासाथ आफैं विकास हुन्छ भन्ने पुरानो बुझाइ अझै कायम छ । एक पछि अर्को नीति योजना बनाउँदै गयौं । यस प्रवृतिले केही सहरी र पढेलेखेका व्यक्ति, आफन्त र कार्यकर्ताहरु बाहेक अरुको जीवनमा तात्विक भिन्नता आएन । वकासको ओठे प्रतिबद्धतालाई रुपान्तरणमुखी बनाउन तथ्याकंमा आधारीत नीति, योजना र बजेट आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हो भने २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक सबैका लागि कोशेढुंगा नै हुनेछ ।
असारे जनगणना चुनौती पनि
नेपालको जनगणनाका लागि मौसम सधैंको चुनौती हो । किनकि हरेक जनगणना हामी जेठ असारमा गर्छौं । यो खेतीको मौसम हो । यतिबेला गाउँमा मानिसहरु घर छोडेर धान रोप्न,मकै भाँच्न निस्किएका हुन्छन् । उनीहरु गणकलाई समय दिन नभ्याउने अवस्थामा हुन्छन् । यसका वाबजुत पनि जनगणना त गर्नैछ । अर्कोतिर जेठ असार झमझम पानी पर्ने मौसम हो । यस्तो बेला हाम्रा गणकहरु ८० वटा प्रश्न लिएर ७० लाख घरपरिवारमा जानुपर्नेछ । हाम्रा गणकहरुलाई धैर्य गर्न, मानिसहरुलाई कुरा बुझाएर सही तथ्यांक लिन भन्नुपर्नेहुन्छ । त्यसैगरी झरी र बर्षातबाट प्रश्नावली जोगाउनु पनि गणकका लागि चुनौती हो ।
जनगणनामा घरको छाना, गाह्रो कस्तो छ, चर्पी कस्तो किसिमको छ, बत्तीको प्रयोग गर्ने कति छन् ? ग्यासको प्रयोग गर्ने कति छन् ? दाउराको प्रयोग गर्ने कति छ ? देखि लिएर अन्य धेरै प्रश्न सोधिने छ जसले तीनै तहका सरकारलाई गरिबी मापन गर्न र तदनुसारको नीति तथा योजना बनाउन मद्धत मिल्नेछ ।
अमेरिकाको जनगणनामा १०÷१२ वटा प्रश्नहरु सोधिन्छन् । भारतमा २०/२५ वटा प्रश्न सोधिन्छन् । हामीले चाहिँ ८० वटा प्रश्न सोध्दैछौं । नेपालको संविधानले ल्याएको समावेशिताको मर्मलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रश्नहरु सोधिएको हो । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ठूलो प्रयास गरेको छ । सरकारले विभिन्न अल्पसंख्यक र जातजातीका सरोकारहरु सुन्न कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । तर ८० वटा प्रश्न लिएर ७० लाख वटा घरपरिवारमा जाने प्रक्रिया चुनौतिपूर्ण छ । यसले संख्यात्मक प्रश्नहरुले गुणात्मकतालाई न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा उत्तरदाताहरु सबै सचेत रहनुपर्दछ ।
जनगणना तालिका अनुसार वैशाख २५ देखि जेठ १४ जनगणना अगावै सुपरिवेक्षकले घरपरिवारलाई प्रश्नावलीका बारेमा सुसुचित गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा फलाना प्रश्नको जवाफ लुक्ने सम्भावनाहरु हुनसक्छ र प्रश्न लुक्यो भने यस्तोे यस्तो हुनसक्छ भन्ने थाहा दिने गरी उत्तरदातालाई तयार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका बारे घरमुलीलेले नभन्न सक्छन् । अपांगताको प्रश्नमा ‘मेरो छोराको अपांगता कसैलाई भनेर के फाइदा’ भन्ने विचार अभिभावकमा हुन सक्छ । ‘मेरो छोरा इराकमा छ अथवा मेरो बुहारी कुबेतमा छ यिनलाई भनेर के फाइदा’ भनेर उत्तरदाताले सत्य तथ्य नभन्न सक्छ । यसरी तथ्यांकहरु लुक्दाखेरी लक्षित वर्गमा सेवा प्रवाह गर्ने, र नीति बनाउने कुराहरुप्रभावित हुनसक्छन् । यस विषयमा नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।
तीनै तहका सरकारको अपनत्व
आगामी जनगणनालाई तीनै तहका सरकारले अपनत्व लिन जरुरी छ । किनभने सरकारहरु जानेर वा नजानेर आपसमा ‘डिस्कनेक्टेड’ हुनसक्छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रहरु छन् । संघीय सरकारले गरेको जनगणनामा प्रदेशले वा पालिकाले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन । या कोरोनाले जनगणना हुँदैन कि भन्ने संसयमा बसेर प्रभावकारी कदम चाल्न निरुत्साहित हुन सक्छन् । यो राष्ट्रिय जनगणना हो । संघीय प्रदेश वा स्थानीय सरकारको मात्र होइन । यसमा तीनै तहका सरकार सहित सबैको स्वामित्व, अपनत्व र संयुक्त प्रयासहरु जरुरी हुन्छ । हुन त वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहसम्म नै कमिटीहरु गठन भएका छन् । यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सहभागी गराएको भए झन् राम्रो हुने थियो । प्रचार प्रसारको कार्यक्रमलाई पनि रेडियो टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका आदिलाई कसरी जनगणनामय बनाउन सकिन्छ र जनतालाई थाहा दिन सकिन्छ । अझै पनि विचार गर्ने समय छ ।
आधारभूत मान्यतामा नचुकौं
हामीमा धेरै चाहिँ ठिक भएन भन्ने गुनासो गर्ने संस्कार छ । जस्तो कि जनगणनामा प्रशस्तै आलोचनाको हुन्छ । तर ती कमी कमजोरी सुधार्न मेरो पनि भूमिका हुन सक्छ भन्नेतर्फ अत्यन्तै कम ध्यान पुगेको छ । गणक आलोकाँचो हुनसक्छ । गणकले सोधेको प्रश्नमा उत्तरदाताले यसो त गरेन भन्नु भन्दा सुझाव पनि दिंदा हुन्छ । वास्तवमा यो हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । उदाहरणको लागि २०६८ को जनगणना मलाई अपांगताको प्रश्नमा ‘तपाईँ के गर्नुहुन्छ ?’‘पढ्नलाई तपाईँ केही साहारा लिनुहुन्छ ?’ ‘तपाईसँग अपागंता छ कि छैन?’ भन्दा मैले ‘अरु अपागंता त मेरो केही छैन तर चश्मा चाहिँ लाउछु’ भने । गणकले मलाई अपांगतामा लेखिदियो । त्यसो भए त नेपालमा पढलेख गर्न चश्मा लगाउने धेरै मान्छे हुन्छन् । ती सबैलाई अपांगता भएका लेखियो भने त देशमा ठूलो संख्याका नागरिक अपांगता भएका हुुन्छन् । त्यसपछि मैले तथ्यांक विभागमा फोन गरेर मलाई यसरी अपांग लेखिदियो भनेर जानकारी गराए । विभागले तपाईं अपांगताको सुचीमा पर्नुहुन्न भन्यो । यस कुरालाई तुरुन्त सच्याएर सुपरीवेक्षक, गणकहरुसम्म खबर पु¥याइयो । मैले भन्न खोजेको जनगणनामा मेरो पनि योगदान र जिम्मेवारी हुन्छ भनेर गणकलाई प्रतिप्रश्न गर्ने, प्रश्नमा छलफल गर्ने गर्न पनि सकिन्छ ।
अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले ‘हामीसँग तथ्यांकै छैन भन्न’ पाउँदैनन् । स्थानीय तहभित्र कति मान्छे अनुपस्थित छन् ? कस्ता व्यवसायमा छन, छोरीको संख्या कति घटयो, कुन जातजाति मानिस कस्ता घरमा बस्छन् जस्ता तथ्यांक जनगणनाले उपलब्ध गराउनेछ ।
यो राष्टिय जनगणना हो । यो भनेको महाकुम्भ मेला हो । प्रत्येक व्यक्तिको गणना चानचुने कुरा हुँदै होइन । प्रत्येक व्यक्तिको अस्तित्वको कुरा हो । यसको महिमा, यसको गहनताको बारेमा र उत्तरदाताको कर्तव्य बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत, निजी संस्था, सञ्चार माध्यम सबैको दायित्व हुन्छ ।
जनगणनामा समावेशी दृष्टिकोण
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग त जनगणना गराउने एउटा अड्डा मात्रै हो । तथ्यांकको महत्वलाई सम्झेर अरु निकायले पनि जनगणनाको प्रचारप्रसारमा जुटिदिनु पर्दछ । उदाहरणको लागि २०६८ को जनगणनामा यतिका धेरै जातजातिका प्रश्न नेपालले सोध्न आँटेकाले भारतको अनुभव बुझ्न यूएन वुमनको समन्वयमा राष्ट्रिय याृजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको एउटा टिम दिल्ली गयौं । त्यहाँका पृथकतावादीहरुले पनि जनगणनामा प्रत्येकको गणना हुनु पर्छ भनेर राष्ट्रिय जनगणनाको समयमा आफ्ना क्याडर्सहरुलाई समेत दुई दिनको विदा दिंदा रहेछन् । बिदा दिएर आफ्नो ठाउँमा गएर गणनामा सहभागी बन भनेर कमाण्डरले पठाउँदा रहेछन् । तिम्रो तथ्यांक भारतको नक्शामा छैन भने तिम्रो अस्तीत्वनै छैनौँ भन्दा रहेछन् ।
समावेशीको दृष्टिकोणले हेर्दा जनगणनाले संविधानको आधार तयार गरेको देखिन्छ । नेपालमा २०५८ मा १ सय १ जातजाति भेटिएका थिएँ भने २०६८ को जनगणनामा १ सय २५ वटा जातजाति भेटिएका थिए । २०७८ मा लोपोन्मुख संस्कृृति अथवा अन्य जातीहरुको पहिचान पनि हुनसक्छ भनेर प्रश्नहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । धेरैजसो प्रश्नहरुमा अन्य भनेर ‘ओपन’ खालका ठाउँहरु पनि बनाइएको छ । अपांगताको दृष्टिकोणले समावेशीमा अत्यन्तै समस्यामा परेको समूह हो । विगतमा आठ किसिमका अपांगता सोधिएको थियो भने यस पटक १२ किसिमका अपांगता सोधिएको छ ।
अपांगतालाई चाहिँ सबैभन्दा बढी समावेशीतामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेक्टर हो भन्ने मलाई लाग्छ । घरपरिवार मुलीले अपांगता सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर नभनिदिने वा लुकाइदिने सम्भावना हुन्छ । यो कुरामा गणक चनाखो हुनुपर्दछ । यसपालीको जनगणनामा जनणना अधिकृत, मुख्य प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, सुपरभाइजर र गणकहरु पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ । त्यस्तै अल्पसंख्यकहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा सामेल गराइएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
गरिबी मा जनगणनामा घरको छाना, गाह्रो कस्तो छ, चर्पी कस्तो किसिमको छ, बत्तीको प्रयोग गर्ने कति छन् ? ग्यासको प्रयोग गर्ने कति छन् ? दाउराको प्रयोग गर्ने कति छ ? देखि लिएर अन्य धेरै प्रश्न सोधिने छ जसले तीनै तहका सरकारलाई गरिबी मापन गर्न र तदनुसारको नीति तथा योजना बनाउन मदत मिल्नेछ ।
यौनिक अल्पसंख्यकका कुरा
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमा कसैले आफूलाई तेस्रो लिंगी त कसैले महिला भन्न रुचाउँछु भन्नुहुन्छ । कसैले मलाई तेस्रो लिंगी नभन मलाई यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको भन भन्नुहुन्छ । कसैले ‘अन्य लिगीं’ भन्दा ठिकै छ भन्ने राय रहेको छ । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको तथ्यांक लिनु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण थियो । यस विषयमा २०६८को जनगणनामा सोधियो । त्यो सोधिसकेपछि उहाँहरुले तथ्यांक. अत्यन्त कम आयो भनेर स्वीकार गर्नुभएन । साच्चै भन्नु पर्दा यस बिषयमा हामीलाई पनि अझै पूर्ण ज्ञान छैन । यस पटक परिवार सूचीकरण फारमको महल ९ मा अन्य लिंगी भनेर राखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधिहरु नै प्रशिक्षणमा राखेर अवधारणा स्पष्ट गराउने अवसर जुटाएको छ । यो सकारात्मक अभ्यास हो ।
कोभिड १९ का कारण अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु फर्किरहेका छन घरमा अनुपस्थितको हकमा यसपाली जनगणनामा प्रश्न सोधिनेछ : नाम के हो ? जात के हो ? लिंग के हो ? उमेर के हो ? शिक्षा कति हो ? विदेश जानुको कारण के हो ? काम हो भने कुन कामको लागि गएको हो ? यस्तो विस्तृत प्रश्नको उत्तर नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । यसले सामाजिक आर्थिक रुपमा नीति बनाउनका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण फिडव्याक दिनेछ ।
अब हामी बुढ्यौली पुस्तामा जादैछौँ भने त बुढ्यौली पुस्तामा मुलुकले लगानी गनुपर्ने हुन्छ । । बुढ्यौली उमेर समुह हेला गरिएको (केयर डेफिसिट)को अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने नीति बजेट, संरचना प्रविधि, केयर गिभर चाहिन्छ ।
अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले हामीसँग तथ्यांकै छैन भन्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहभित्र कति मान्छे अनुपस्थित छन् ? कस्ता व्यवसायमा छन, छोरीको संख्या कति घट्यो, कुन जातजाति मानिस कस्ता घरमा बस्छन् जस्ता तथ्यांक जनगणनाले उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी कस्ता आर्थिक गतिविधिमा छन्, घर परीवारले सम्पति महिलाका नाममा राखेका छन कि छैनन्, विवाह गर्ने उमेर कस्तो छ कुन कामको लागि बाहिर छन् भनेर तथ्यांक पाउन सकिन्छ । मेरो पालिकाका कति मान्छेहरु के कारणले मृत्यू भएको छ भन्ने तथ्यांक आउछ । मृत्युको कारण कारण हत्या हो कि ? सवारी दुर्घटनाले कतिको ज्यान गयो ? कति विधवा भए कति अनाथ भए कति हस्पिटलमै छन् कति काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् अत्तोपत्तो छैन । तर यी सबै कुराको परिपुरण जनगणनाले गर्नेछ ।
डेमोग्राफिक प्रोेफाइलका कुरा
हाम्रो डेमोग्राफिक प्रोफाइल हेर्ने भने १५ देखि ५९ वर्षको उमेरका मानिस ५७ प्रतिशत छन् । नेपालमा अहिले युवापुस्ता धेरै छन् । सन् २०३० अर्थात अबको ९ वर्ष पछि नेपालमा युवापुस्ता घटनेछन् । अहिलेको जस्तो युवापुस्ता नेपालले भुतो न भविष्य कहिल्यै पाउने छैन । दुखको कुरा कोरोना कहरबाट यस्ताका नेपाली फर्के पनि हामीले उनीहरुलाई मुलुकमा अटाउन सकेनौ ।
समानताका कुरा गर्दा राष्ट्रपति महिला ३३ प्रतिशत महिला सांसद , उपप्रमुखहरु महिला हुनुहुन्छ । बलियो संविधान छ । यी सबै राम्रा प्रयास हुन् । तर यसले औपचारिक समानता मात्र कायम गरेको छ ।
नेपालमा यो विषयमा सजगता र सचेतता कस्तो छ ? अब हामी बुढ्यौली पुस्तामा जादैछौँ भने त बुढ्यौली पुस्तामा मुलुकले लगानी गनुपर्ने हुन्छ । । बुढ्यौली उमेर समूह हेला गरिएको (केयर डेफिसीट)को अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने नीति बजेट, संरचना प्रविधि, केयर गिभर चाहिन्छ । हाम्रो जनसंख्या. साइजमा छोरीको संख्या घटेको छ । १२ वटा जिल्लामा बालिकाहरु घटिसकेको देखियो ०६८ को जनगणनामा । समानताका कुरा गर्दा राष्ट्रपति महिला ३३ प्रतिशत महिला सांसद, उपप्रमुखहरु महिला हुनुहुन्छ । बलियो संविधान छ । यी सबै राम्रा प्रयास हुन् । तर यसले औपचारिक समानता मात्र कायम गरेको छ । तर व्यवहारमा हेरौं विवाहको उमेर हेर्ने हो भने २० वर्ष तोकिएको छ । तर, पनि १८ बर्षभन्दा तल विहे गर्नेको जनसंख्या ३७ प्रतिशत छ भनेर तथ्यांक आइरहेको छ ।
आगामी जनगणना सानो सर्वेक्षण होइन । ७० लाख परीवारमा पुग्ने बृहत महापर्व हो । यसको नारा नै ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ छ । त्यसैले घरमा आउने गणकलाई सही तथ्यांक टिपाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । हामीले टिपाएका तथ्यांक हाम्रै लागि हुन् । जनगणना तथ्यांकका आधारमा विकासका नीति, योजना बन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम बन्छन् । त्यसबाट लाभान्वित हुने हामी नै हौं । त्यसैले जनगणनामा सही तथ्यांक लिनु सरकारको दायित्व हो । सही तथ्यांक दिनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।
(लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण विज्ञ जोशीसँग नेपाली बहसका प्रधान सम्पादक चेतन अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
… अनि आमा रुनुभयो
पाँच वर्षमा अध्यक्ष ओलीप्रति बदलिएको मधेस : हिजो बाइ बाइ, आज हाई हाई
अध्यक्ष ओलीको अवधारणामा समृद्ध बाह्रविसे निर्माणको आधार
निर्वाचनमा कस्ता मतदाताले कसलाई प्रभाव पार्छन्
नयाँ वर्षमा अध्यक्ष ओलीको शुभकामना– निर्वाचन वर्ष एमालेका लागि सुखद
उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने बहस जरुरी
मकवानपुरमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु
जातपात नहेरी काम गर्नु भन्दै कलैयाका मेयरलाई तौल बराबरको लड्डुले स्वागत
अर्जुनधारामा एमालेका बलदेव र खड्गमाया विजयी
चौतर्फी घेराबन्दीले सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ : सुवासचन्द्र नेम्बाङ
बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डे पक्राउ